Ukukhulisa idijithali nokuqapha abasebenzi kwabakwa-TheOneSpy App
Uhlelo lokusebenza lwe-TOS lugcwalisa ku-Monitoring Features oyidingayo
Uhlelo lokusebenza lokuqapha i-TheOneSpy lunezinqwaba zokulandelela, ukuqapha okukude, ukulawula okukude, ukuqapha isici sezingxoxo ongazisebenzisa ukugcina intsha yakho / izingane nabasebenzi i-smartphone ne-PC. Kusukela kwinombolo yefoni yocingo neendawo ukuthi ungabheka kanjani amakholi efoni wangempela - kunezindlela eziningi nge-app ye-TOS egcwele egcwele i-TOS ukuthola ukuthi kwenzekani ezweni labo.
Ukulalela Okubukhoma Kweqiniso, Ukusakaza Khamera, Ukukwabelana Kwesikrini
Manje sebenzisa ukuhlolwa kwezingane ze-smartphone zakho ze-360 ze-smartphone! Lalela ukuhlala okuzungezile, ukude ukuvula imakrofoni yocingo bese ulalele ingxoxo yeselula online. Ngalesi sici ungakwazi ukulandelela / ukubuka imvelo yesikhathi sangempela yezingane zakho.
Phila ngokuzungezile Ukulalela
Ukusakaza kwekhamera ebukhoma
Bugging - Bug Hambayo Ucingo
Enye yegciwane lesici esisha efonini ethunyelwe isofthiwe ye-TheOneSpy yokuthenga ifoni kuphakheji yayo ye-Xtreme. Kuyinto isinyathelo kusengaphambili izinhlelo zokusebenza ukuthenga izingcingo kwifoni bug kid, rekhoda amazwi nge microphone eyimfihlo futhi spy mic, uthayipha emuva futhi fronts cam cam izithombe kude.
I-Edge entsha ye-Experience Monitoring!
THENGA MANJEZama i-Demo
Irekhodi - Lalela Amakholi Efoni Nezirekhodi Zezingane Eziseduze Nezingane
I-TheOneSpy's recorder, uhlelo lokusebenza oluphezulu lwe-Android likuvumela ukuba ulalele kuphela umsindo ozungezile namazwi kubantwana / intsha yocingo kodwa ulalele okuzungezile futhi ukuwaqopha bese ulondoloza iphaneli yokulawula yabazali. I-TOS irekhoda yocingo ibuye ivumele abazali ukuba babhale izingcingo zezwi lezingane futhi balalele lawa mafayela aqoshiwe ngeDashibhodi ye-TOS.
Ukuqopha umsindo ozungezile
Londoloza phezu kwe-intanethi
Gcina imiyalezo yombhalo
Sebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy ukuhlola imiyalezo yabo, iMessages nemilayezo yephini: funda ifundwa futhi ithunyelwe imiyalezo ngokushesha nge-SMS ye-Android.
Skena izingodo zabo zekholi - App Record Recorder
Ngomshini wokuqopha ucingo ngisho noma ulahlekelwe ucingo bukhoma, ungakwazi ukuskena njalo ngohlelo lokusebenza lwelogi lwefoni. Omunye angathola ukuthi ubani obizile futhi ubani obabiza ngokufaka uhlelo lokusebenza lwe-TOS ukurekhoda izingcingo zefoni. Uhlelo lokusebenza logi lwamakholi lunikeza nomlando wocingo kanye nemininingwane yocingo.
Umshayeli we-Caller Locaion
I-GPS Tracker - Landelela indawo yabo
Ukusebenzisa i-GPS, I-TheOneSpy ingathola indawo yawo ngqo. Isici se-track tracker siwusizo ngokukhethekile kubaqashi abaye basebenzisa abasebenzi babo ekusebenziseni okusemthethweni - bona izindawo zabo zokuzikhandla futhi baqinisekise ukuthi uhambo lwabo lobuchwepheshe luhlala ochwepheshe
Ukuhlola indawo yendawo ye-GPS
Oxhumene nabo - Hlola amathrekhi abo oxhumana nabo
Uhlelo lokusebenza olunamandla lokuxhumana lwe-TheOneSpy lukuvumela ukuba udlulise amehlo futhi uguqule uhlu lwezintambo zocingo, futhi
Hlola ama-aphoyintimenti abo kanye nezikhumbuzo
Thola ukuthi bahlela kuphi nokuthi yini abahlela ukuyenza ngokufaka ikhalenda yefoni yabo, ama-aphoyintimenti noma izingxenye zezikhumbuzi
Ukuqapha kumadivayisi amaningi ngesikhathi esisodwa
Ngesici se-TheOneSpy sika-switch switch, ungashintsha ukuqapha kwakho kusuka kwenye idivayisi kuya kwenye.
Ilayisensi eyodwa yamadivayisi angenamkhawulo
Shintsha ilayisensi yakho ku-Multiple Platform
I-Cam Pics - Buka igalari yezithombe zabo
Ungakwazi ukuqapha izithombe zefoni bese uzibuka noma ngabe isithombe sithathwe ifoni yakho yengane, elayishiwe kusuka ku-intanethi, noma itholwe nge-MMS noma i-imeyili futhi igcinwe kugalari yezithombe.
I-Social Media - I-Monitor Social Instant Messengers App
Ngehlelo lokusebenza lokulandelela izithunywa, funda izingxoxo ezigcotshwe ngama-stickers kanye nemizwelo, hlola izingodo zocingo kwizithunywa ezizenzekile zifakwe isitembu nosuku nesikhathi somsebenzi ngamunye. Ngaphezu kwalokho, nge-TOS yokuqapha ingxoxo, kulula ukuhlola isithunywa futhi ulalele izingcingo zevidiyo zesithunywa, imiyalezo, nokunye okuningi.
Buka umlando wocingo
I-Live Screen Recording
Ukuqopha isikrini sekhamera
Ukuqopha kwesikrini se-Chrome
Ukuqopha kwesikrini se-Gmail
Ukuqopha isikrini se-SMS
I-SnapChat Screen Recoding
WhatsApp Screen Ukuqopha
Ukuqopha isikrini se-YouTube
I-WeChat Screen Ukuqopha
Ukuqopha i-Facebook Screen
I-Kik Screen Ukuqopha
Ukuqopha kwesikrini somugqa
IMO Ukuqopha isikrini
I-Skype Screen Ukuqopha
Ukuqopha isikrini se-Tumblr
Viber Screen Ukuqopha
Ukurekhoda Kwesikrini Ukufuna
I-IM Social Media
Imicimbi ye-SnapChat NEW
Qapha i-WhatsApp Logs
Whatsapp Imilayezo Yezwi
Qapha izingqikithi zemizila
IMO Imilayezo Yezwi
Izinkinobho ze-imeyili NEW
Ukungena kwephasiwedi NEW
Izigijimi ezithinta izithunywa NEW
Izinkinobho ze-SMS NEW
Imibiko Yombhalo Spy
Imilayezo ye-BBM Chat
Isaziso se-Heads UP / Ticker NEW
Landelela i-GPS Indawo
I-GPS Indawo Tracker
Buka umlando wendawo yabo
Buka indawo yamanje ye-GPS
Buka umlando we-Tracker wamasonto onke
Izindawo ezikhawulelwe kuMarku
Maka izindawo ezivikelekile
Buka i-Gmail yabo
Buka ama-imeyili angenayo / aphumayo
Buka Amafayela Multimedia
Thatha ama-Screenshots NEW
Bheka izithombe zabo
Buka amavidiyo abo
Lalela ukurekhoda kwabo kwezwi
Qapha imisebenzi ye-inthanethi
Imiqulu yomlando yokuphequlula
Bheka Amawebhusayithi Awamabhukhimakhi
Buka imisebenzi yefoni
Buka ifonibhuku yabo
Buka Imicimbi yeKhalenda
Buka imisebenzi yabo yokusebenza
Isaziso Sokushintsha kweSim
Umlawuli wefoni kude
Buka izinhlelo zokusebenza ezifakiwe
I-Lock Lock / UnLock NEW
I-Command Remote Dashboard Command
Ukumisa okwesikhashana noma Qala uhlelo lokusebenza
Ukude ukukhipha isicelo
Setha Izintandokazi Zakho Zokuqapha
Vimba i-Inthanethi ngenkathi ushayela
Vimba ukuthumela imiyalezo ngenkathi ushayela
Uhlelo lokusebenza Vimbela ukuvula NEW
Vimba Izingcingo ezingenayo ze-Block Stranger
Shintsha idivayisi yakho
Shintsha i-Platform yakho